Gaalkacyo:- Dab Burburiywy Warshad Soo Saarta Joodariyadda |
Gaalkacyo:- Dab Burburiywy Warshad Soo Saarta Joodariyadda
Wararka ka imanaya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa sheegaya in xalay dab xoogg leh uu ka kacay goob ganacsi oo ku taala Koofurta magaalada, iyadoo saqdii dhexe ee xalay lagu guuleystay daminta dabkaasi.
Dabka ayaa sida aan wararka ku haleyno ka dhashay warshad soo saarta Joodariyaasha ama isbuunyada oo ku taalla Koonfurta magaalada Gaalkacyo waxa uuna bilaawday xalay Abaaro 09:00am habeynimo, iyadoo ilaa hadda aan si rasmi ah loo sheegin waxa dhaliyay dabkaas.
Dad weyne badan ayaa xalay iskugu soo baxay sidii loo xakameyn lahaa dabkaas, iyadoo lasoo sheegayo in damin dabkaas ay qaadatay mudo saacado ah, maadaama koonfurta magaalada Gaalkacyo aysan lageyn gadiid dab damis ah.
Muddo kadib ayaa waxaa la sheegay in gadiid dab damis ah oo laga soo diray dowladda Hoose ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ee Puntland ay ku guulaysteen daminta dabkaas.
Si rasmi ah looma sheegin waxa uu ka dhashay dabkaas sidoo kale waxaan si dhab ah loo ogeyn inta uu dhanyahay khasaaraha hantiyeed ee ka dhashay dabkaas lamana soo sheegin wax khasaare nafeed ah.